Kedu ihe biostimulant na-eme na osisi ahụ? - Potatoes News
Biostimulants, eji mee ihe n'ụzọ ziri ezi, na-eme ka ihe ọkụkụ ahụ sie ike. Kedu?
Na nke ikpeazụ Akwụkwọ Akụkọ anyị gwara gị ihe dị iche iche (gụnyere ọkụ na ụkọ mmiri) yana na ha nwere ike ịkpata nrụgide na osisi wee nye mfu.
Ndị ọrụ ugbo nke Arable ga-enwewanye mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na obere akpa ha n'afọ ndị na-abịanụ. Mmebi ego n'ihi mgbanwe ihu igwe nwere ike ịbụ ihe karịrị 50% nke nnukwu ego site na 2050. Nke a bụ ihe onye nyocha WUR bụ Daan Verstand kwuru n'oge NPPL webinar 'Ihu Igwe mmegharị : na-emeso oke akọrọ na oke mmiri ' .
Gini mere ekpom oku na unwu ji enwe nsogbu karia?
Osisi na-agbanwe agbanwe mgbe niile na nrụgide nke ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Agbanyeghị, mgbe nrụgide gabigara oke ma ọ bụ ogologo oge, usoro nnabata ihe ọkụkụ agaghịzi enwe ike ịnagide ọnọdụ ndị a dị oke egwu. Nke a nwere ike iduga oke mbibi. Oge okpomọkụ na ọkọchị na-adịwanye ogologo ma na-adịwanye njọ ma na-emekarị na mberede.
Enwere ike ịhụ mmetụta a n'ọhịa?
N'afọ gara aga, Syngenta duziri ọnwụnwa buru ibu na nduku na UK site na iji biostimulant Quantis.
"N'ime ule iri atọ na-enwe okpomọkụ karịa 30 Celsius C na ihe karịrị awa anọ kwa ụbọchị, mkpụrụ Quantis dị 25 t / ha elu na nkezi. N'ụzọ dị ịrịba ama, nzaghachi kasịnụ n'ihe banyere mkpụrụ na tuber buru ụzọ mee ugboro ugboro n'oge na ọnọdụ ndị nwere ọnọdụ okpomọkụ kachasị elu.
kwuru David King, onye njikwa teknụzụ na Syngenta UK.
Mmetụta dị a stressaa ka nrụgide okpomọkụ na-enwe na poteto?
Ọmụmụ ihe ọmụmụ banyere ihe ọmụmụ na-egosi na mgbe osisi nọ na nrụgide, mkpụrụ ndụ na-azaghachi na ọkwa dị ala iji belata mmetụta nke okpomọkụ na ọkọchị.
Mgbe ọ bụla ọrụ sel na-agbanwe, a na-achọ ike nke nwere ike iji ya mee ihe na nchekwa na carbohydrate, dịka ọmụmaatụ na mgbọrọgwụ na nduku na tubers.
Nsonaazụ nwere ike ịbụ nbelata mkpụrụ ma nọmba na nha nke tubers, yana ndaba na ogo.
N'afọ a, Syngenta amalitela ọnwụnwa bara uru buru ibu na Netherlands, yana ndị na-eto eto na Den Dench, iji nweta nkọwa doro anya banyere uru bara uru nke Quantis: Can Quantis na-ebelata mbibi nke ụkọ mmiri na nrụgide okpomọkụ na-egbochi mbelata mkpụrụ n'ihi nchegbu?
Kedu ọrụ nchedo osmo nke Quantis?
Ozugbo mkpụrụ ndụ gwụchara n'ihi okpomọkụ na ụkọ mmiri ozuzo, ha anaghịzi arụ ọrụ nke ọma ma ghara iguzogide nsogbu nrụgide. Quantis 'osmo-echebe ọrụ na-ewusi akpụkpọ ahụ plasma gbara gburugburu cell ahụ. Nke a na - enye ohere ka nsogbu turgor (nrụgide dị na sel nke na - ejigide mmiri dị na sel ahụ) ka ọ dịrị na egwu, na - ekwe ka cell ahụ gaa n’ihu ịrụ ọrụ nke ọma.
Ga-achọ ịmata etu Quantis si arụ ọrụ?
Naanị site na nyocha dị mma na ndụmọdụ sitere na ntọala ka anyị nwere ike ịmepụta ihe osise nke oge kachasị mma iji Quantis, yabụ kedu ndụmọdụ gbasara ngwa kwesịrị ekwesị maka ndị na-eto eto.
Nọrọ na-ege ntị, anyị ga-abịaghachi mgbe niile na ozi ndị ọzọ gbasara afọ a na-anwale ọnwụnwa ma mee ka ị dị ọhụrụ na ahụmịhe anyị .
/ ndu /
Tags: ihe ojoomgbasa oziMgbanwe ihu igweNchegbu ọkụZọSyngenta
ADAPT oru ngo:
Ọrụ nyocha ndị ọrụ ugbo na-egosi mgbanwe ihu igwe dị ka nnukwu ihe iyi egwu mmepụta nduku Europe
Mmetụta ọkụ na-emetụta Idaho Ag
Ahịhịa a kụrụ na n'ihe ize ndụ nke ọrịa n'oge ala iji nwayọọ
Rumgha Asịrị nke Mbupụ Banyere, Ọrụ na-akpata ọgba aghara n'etiti ndị na-akụ Poteto na Pakistan